Impilo esifushane umculi sasifana ukukhanya kombani. Vincent Van Gogh wayephila ezweni zeminyaka 37, kodwa washiya ifa fantastically omkhulu kwezobuciko: ngaphezu kuka 1,700 imisebenzi, kuhlanganise azungeze 900 imidwebo 800 imidwebo imidwebo. Van Gogh imidwebo endalini yesimanje beat wonke amarekhodi ngezindleko, futhi eqinisweni phakathi nokuphila kwakhe wakwazi ukuthengisa kuphela omunye izenzo zakhe abahlabelela ngazo yimali lanamuhla oye wamlethela ngemali nje $ 80. ubuntu eziphikisanayo ngokomzwelo umdwebi futhi lokusungula ayekufezile babe engaqondakali besikhathi kakhulu.
Manje, cishe Biography of the edumile umDashi ebhaliwe izincwadi eziningi, futhi imidwebo yakhe kanye nemidwebo ukuthatha zanda ohlonishwa kakhulu art kumamyuziyamu emhlabeni. Masikhumbule umsebenzi we Expressionist omkhulu futhi yinhle, akuyona efana yimuphi omunye Van Gogh imidwebo.
izinkathi ezintathu zokudala zokuphila umdwebi sika
indlela Creative kaVincent Van goga izazimlando zobuciko ihlukaniswe izinkathi ezintathu: Dutch (1881-1886 GG.), Paris (1886-1888 GG.), Futhi kamuva, okwaqala cishe 1888 kwaze kwaba sekufeni kwakhe ngo-1890. Nasi kuphila okufushane yokudala, ubude iminyaka 9 kuphela ubudala, wayemiselwe ukuba umuntu. Webs angalezi zinkathi kakhulu ihluke nomunye futhi izifundo kanye nendlela yokubhala. Ngithanda ukucacisa ukuthi imidwebo Van goga, esimagama aso ezisohlwini lesi sihloko Yiqiniso, kuphela ingxenye encane ifa lakhe elikhulu kwezobuciko.
Vincent van Gogh laqala ukwenza umsebenzi wokudala ngaphambili kakhulu ngo 1881, kodwa ke ikakhulukazi bakhangwa iphethini ingcaca. Akazange amukelwe professional art imfundo, nakuba wazama izikhathi eziningana ukuze ufunde umculi. Kodwa ngangingeke ngikwazi ukumelana umoya wokuvukela, wayebonisa ikhono lakhe beyohlanganyela kunoma iyiphi nohlaka zezemfundo owenza Vincent abasha ukuba ayeke isikole futhi ukupenda ngokwabo.
isikhathi Isithombe iVáh Gogh sika-Dutch
Ukuthola uwoyela imidwebo, umdwebi wayengaphezu kwabo bonke abantu ukubhala ukuphila kwabo elibuhlungu, nokuphila okunzima. Imidwebo kwalesi sikhathi kukhona into enjalo esikhanyayo enhle Van goga okudaliwe, kamuva bamlethela posthumous udumo ovala izindlebe. Zinjalo umsebenzi leyo minyaka: "Lo Ekudleni Potato", "Weaver", "ongumlimi". Palette umbala lezi imidwebo simnyama futhi udangele, njengoba enza ukuphila zabantu abampofu.
It kungabonakala njengoba umculi uyazwelana kakhulu kubalingisi yakhe. Van Gogh waba umphefumulo isabele kakhulu, nomusa nobubele. Ngaphezu kwalokho, yena kakhulu inkolo, isikhathi esithile ngisho waba ngumshumayeli yobuKristu. Zonke imiyalo eTestamenteni Elisha yena ziqondwe njengoba zinjalo. Wahamba izingubo elula, ekhanya wasuthisa futhi aphila ngokunethezeka besezindlwaneni zokulinda ampofu. Nokho, waphuma lomkhaya ocebile kakhulu, futhi uma wayefuna, akwazi ukuqhubeka ibhizinisi lomndeni (ukuhweba imidwebo kanye art izinto). Kodwa lokho kwakwenzeka Vincent Van Gogh, Umdwebo kwadingeka ezinhle ngesikhathi kubhalwa lesi sihloko, kodwa awuthengisanga.
Ngo-1886, Van Gogh kokushiya Holland lwakubo futhi zayiswa Paris, wahlala khona ukufunda imidwebo, evakashela embukisweni abadwebi imfashini, bajwayelana umsebenzi we Impressionists. Imidwebo ngu-Toulouse Lautrec, Monet, Pissarro, Signac, Renoir, Van Gogh ikhiqizwa at umxhwele kakhulu futhi kwaba nethonya elikhulu ku-ukuqhubeka ngendlela yakhe yokudala yekubhala. Van Gogh uqala ukulalelisisa umbala, manje-ke ukuheha abantu nje kuphela, kodwa futhi namathafa namanje Lifes. Iphalethi Umculi yaba ezimibalabala kakhudlwana futhi elikhanyayo, ngemisebenzi kwesikhathi Paris iqala ukubonisa Van goga ithalente njengoba Umdwebi okukhulu.
In Paris, umculi is Nokho ukusebenza unjengomuntu yidemoni, njengoba ngaso sonke isikhathi. Nazi ezinye indlela evamile iVáh Gogh, yabhalwa ngesikhathi: "Ulwandle e Saint Mary," "bamphathele nezimbali endaweni vase blue", "I eMfuleni iSeine ngezikebhe", "Noma kunjalo ekuphileni ngezimbali nojikanelanga", "Ngokufanayo, ihhovisi izimbali nama-alimondi", " izivande e Montmartre "," uphahla Paris "," i-Portrait kowesifazane blue "nokunye. d. inkathi Paris Van Gogh ukuthi yathela impela, kuleyo minyaka umculi okuye kwabhalwa imidwebo ngu-250. Ngesikhathi esifanayo Van uGogi wahlangana Gauguin, ubungane babo kanyenamadlelandawonye wokudala kuyigugu kakhulu kuye. Kodwa nebalingisi Abadali ezimbili kukhona ezihluke kakhulu. Futhi konke izophela ukuxabana, okuholela Vincent ukuba ukuphazamiseka kwemizwa. Kuyinto Ngale nkathi enzima yokuba nokuphila zihlanganisa Van goga yokudweba "Self-Portrait nge Indlebe wabopha futhi Pipe".
Van goga oeuvre e Arlee
Kancane kancane amatasatasa Paris iqala ukuba uhlole Van Gogh, futhi ebusika 1888 waya Provence, edolobheni Arles. Lapha wayengumuntu ukubhala okudaliwe yakhe ekhaliphile kakhulu. Imvelo enhle zalezi zindawo owuthanda umculi. Omunye ngemva komunye, ukuthi kudala emidwebweni ezifana "Landscape nge emgwaqweni, nemisayipuresi futhi inkanyezi," "Haystacks e Provence", "Red Isivini," "U-Olive izihlahla ngemuva Alpillya", "Ukuvuna," "ISiganga Poppies", "Izintaba e Saint-Remy "," Cypresses "nezinye kwenkundla eziningi ongenakuqhathaniswa - obukhulu kuzo imidwebo post-Impressionist.
Futhi ubhala uchungechunge engapheli ezimibalabala namanje Lifes. Akukho muntu owake ngesineke izimbali njengoba Vincent Van Gogh. Le midwebo - the "Sunflowers" ezidumile "irises" - zalotshwa Provence. Umdwebi ushukumisela ngendwangu Amasimu engapheli Provence nomoya esobala okumsulwa, ukuqhakaza izingadi, cypresses, ukunethezeka neminqumo. Ngesikhathi esifanayo kuba njalo portraitist kakhulu. Ngo-Arles, nakhu ayekubhalile ekumeni eziningi futhi self-portraits.
Namanje ukuphila "Sunflowers" ingenye imidwebo adume kakhulu Van Gogh. Abaningi bethu bazi ngokuhlangenwe lokhu ngendwangu ku yakhiwe eziningi. Phakathi naleso sikhathi, Impressionist namanje ukuphila akusona esisodwa esiye ebhaliwe, futhi lonke umjikelezo we imidwebo eziyisikhombisa, eyayibonakala zaveza izimbali libalele. Kodwa omunye imisebenzi elahlekile eJapane lapho ukuqhuma kwamabhomu e-athomu, futhi omunye ukuze lost in iqoqo yangasese. Ngakho, ukuze ezisekhona imidwebo 5 kuphela kulolu chungechunge.
Lawa imidwebo Van goga. Incazelo nesithombe imifanekiso, yebo, awakwazi ukuveza zonke charm yasekuqaleni. Noma kunjalo, kungaba efiselekayo nikela "Sunflowers" has ambalwa imigqa. Lokhu ukuphila namanje nje ashaya kwelanga! Van Gogh singcono kakhulu yena, ekutholeni e ezihlukahlukene ophuzi imibala. Abanye abacwaningi bakholelwa ukuthi kulo msebenzi, umculi wembula isifo sengqondo, njengoba kufakazelwa lokhu ukukhanya engavamile kakhulu futhi saturation impilo namanje.
I yokudweba "Ogcwele Izinkanyezi ebusuku"
Van Gogh yokudweba "Ubusuku", kunalokho, "Ogcwele Izinkanyezi ebusuku", lalotshwa kuye e Saint-Rémy, ngo-1889. Lokhu enkulu usayizi ngendwangu 73h92 ukubona umbala wesikimu engavamile kakhulu indalo le kumnandi lomdwebi -. Inhlanganisela okwesibhakabhaka, isibhakabhaka, amnyama imibala eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okotshani yemibala ezahlukene ophuzi.
lezisekelo Compositional kukhona cypresses amnyama ongaphambili, esigodini amanga idolobha elincane ukucasha, nangaphezulu wenabisela esibhakabhakeni ngendlela engachazeki ukubuyisa nge nehaba izinkanyezi omkhulu futhi inyanga elikhazimulayo sengathi baphotha e vortex -Milky Way. Lesi sithombe, athandani kakhulu emisebenzini Van Gogh, kubalulekile ukubukela, ezihambayo ekujana impela, eduze kungenakwenzeka ukuba ngiziqonde ngokuphelele zihlakazeke imivimbo ezinkulu.
Ukudweba "ISonto at Auvers"
Van Gogh Umdwebo "ISonto at Auvers" Ungomunye edume kunazo futhi ethandwa yemisebenzi yakhe. Lo msebenzi ayebhalwe nonyaka afa ngawo, umdwebi sika esevele ugulela ukufa. Van Gogh wahlushwa ukugula kakhulu engqondweni, okuyinto ayikwazanga kodwa kuthinta ngokudweba.
Figure Church, okuyinto izingoma isikhungo wenza mihlobiso imigqa shaking. Sky - elisindayo, luhlaza - njengoba limi phezu esontweni futhi amqhube isisindo sakhe phambili. Lihlobene nokubhekana ubuso umbukeli kwezinye usongo eyayisondela, ongenza enhliziyweni imizwa ukukhathazeka. Ingxenye engezansi isithombe esikhanyayo, umuntu ngale ndlela olunjengemfoloko notshani elangeni.
Njengoba kushiwo ngaphambili, izindleko umsebenzi we postimpressionist Dutch eliphezulu kakhulu. Kodwa ngisho nangosizo omningi imali, kunzima ukuthenga umdwebo, umlobi okuyinto enkulu Van Gogh yena. Imidwebo ne "Sunflowers" izihloko okwamanje kungenziwa esikalini ngasiphi lemali mega-ezinkulu. Ngo-1987, omunye imidwebo kulolu chungechunge ku endalini "Christie" lathengiswa kwezigidi ezingu 40.5 zamaRandi. Kusukela ngaleso sikhathi, kwathatha isikhathi esiningi, kodwa ngenxa izindleko lo msebenzi ungase ukhule kaningi.
Umdwebo "L'Arlesienne" wadayiswa endalini "Christie" ngonyaka ka-2006 i-abayizigidi ezingu-40,3, bese "ongumlimi Owesifazane Straw Hat" yathengwa ngo-1997 ngo- $ 47 million. Uma umculi bangaphila kuze kube namuhla, bekuyoba omunye wabantu abacebe kakhulu emhlabeni, kodwa lapho efa ngo-ubumpofu, ungazi ngisho nokwazi ukuthi ayengeve bayakwazisa izizukulwane akhe okudala esizayo.
ERussia, imidwebo Van goga kungabonwa Petersburg, le Hermitage, kanye e Moscow, Museum of Fine Arts. Pushkin. Vele ezweni lethu, kukhona 14 imisebenzi by Van Gogh: "Arena ngesikhathi Arles", "maqhugwane", "Ekuseni", "Landscape ne House olimayo," "Umfanekiso ka Nkosikazi Trabyuk" "Izikebhe e Sainte-Marie," "White endlini ebusuku "," izintokazi ka Arles "," isihlahla "," Hamba iziboshwa "," i-Portrait uDkt uFeliksi Rey, " " isivini Red ", " Landscape at Auvers emva kwemvula. '